कोरोनाको भय : मानसिक समस्याको जोखिम – Samacharpati
कोरोनाको प्रकोपले बिश्व नै अहिले आक्रान्त बनेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वव्यापी रुपमा गम्भीर मनोसामाजिक असर सिर्जना गरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले चेतावनी दिएको छ। विशेष गरी धेरै मानिसमा तनावको समस्या देखिन थालेको संयुक्त राष्ट्रसंघले उल्लेख गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको रणनीतिक पत्रमा महामारी विरुद्धको अभियानको क्रममा सबै देशलाई मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सहयोगको व्यवस्था पनि गर्न आग्रह गरेको छ ।
शारीरिक स्वास्थ्यसँगै मानसिक स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिएर सेवा प्रदान गर्न अपिल गरेको छ । कोरोनाको प्रकोप र लकडाउन पछि नेपालमा पनि मानसिक समस्या सगै आत्महत्याको जोखिम पनि बढेर गएको देखिन्छ ।
रोगको संक्रमण तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिको बेला मानिसहरुमा तनाब ,डर , चिन्ताका साथै विभिन्न किसिमका मनोसामााजिक तथा मानसिक समस्याका लक्षणहरु देखिन सक्छन् ।
कस्ता कस्ता लक्षण देखिन्छन् त !
यस्ता लक्षणहरु बिपति वा संकटको बेला कतिलाई तुरुन्तै देखिन्छन् भने कतिपयलाई केहि समय पछि मात्र देखिन शुरुहुन्छ ।
समस्या कसरी कम गर्न सकिन्छ !
केहिलाई भने लक्षण कम हुँदै जानुको सट्टा झन झन बढने पनि हुनसक्छ ।
जसले मनोसामाजिक समस्या वा मानसिक स्बास्थ्य समस्याको जोखिम बढेर जान्छ। यस्तो नहोस् भन्नका लागि स्वंय ब्यक्तिले आफ्न‍ो शारीरिक स्बास्थ्यको साथै मनक‍ो स्याहारसुसारमा पनि बिशेष ध्यानदिनु जरुरी हुन्छ। जसलाई स्वहेरचाह भनिन्छ । यस्तो बेलामा बिज्ञको सहयोग लिनुपर्छ ।
बागलुङमा तलब भत्ता नपाएको भन्दै कर्मचारीद्धारा छिस्ती खानेपानी आयोजना बन्द